Somaliland: Komishanka Doorashooyinka iyo Dhibta uu horseedi karo – W/Q: Maxamed Cismaan | Aftahan News
Somaliland: Komishanka Doorashooyinka iyo Dhibta uu horseedi karo – W/Q: Maxamed Cismaan
Sidaynu ognahay Komishinka doorashooyinka Qaranka Somaliland waxay ku dhawaqeen inaanay qabsoomaynin doorashada golayaasha degaanka iyo wakiilladu waqtigii loogu tala galay ee 29-ka bisha 3-aad ee 2019-ka.
Haddaba, waxaa is waydiin mudan cidda mas’uuliyada iska leh dib u dhaca doorashada jamhuuriyada Somaliland. Bulshada ka faaloota arimaha siyaasada Somaliland waxay eeda ugu wayn ee dib u dhaca doorashada jamhuuriyada Somaliland saarayaan madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland oo ah kan looga fadhiyo inuu dalka ka hirgaliyo doorasho.
XUBNAHA GUDDIGA DOORASHOOYINKA SOMALLILAND 2018
Sidaynu ogsoonahay Xisbiga ugu aqlabiyada badan dhinaca mucaaradka, ayaa ka biya diiday sanadkan awalkisii komishinka doorashooyinka qaranka, waxayna soo jeediyeen in labadalo komishinka doorashooyinka qaranka, balse arinka waxaa ka hor yimid madaxweyne muuse, isagoona sheegay badalka la badala komishinka waxay carqalad ku keenaysaa doorashadii madaxtooyada ee ina soo dhaaftay.
Dulucda qoraalkaygan wuxuu yahay isku dhajintan uu madaxweyne muuse isku dhajinayo sii joogista komishinka doorashooyinka qaranka waxay horseedi kartaa inay soo fara galiyaan dowladaha daneeya doorashooyinka Somaliland.
Gunti iyo gunaanadka ka madaxweyne mustaqbal ahaan madaxweyne muuse waxaan ugu baaqayaa inuu u hogaansamo xisbiga ugu aqlabiyada badan dhinaca mucaaradka soo jeedintiisa, si loo helo komishin doorasho lagu kalsoonankaro. Dalkan bulshadiisa waxay diyaar u yihin inay doortaan golayaal qaran, kuwasoo la jaan qadaya xaalada ka taagan Somaliland.